Ku soo dejiso WhatsApp BlackBerry, halkan ka hel | Wararka Gadget
Ku soo dejiso WhatsApp Blackberry
WhatsApp waa macmiilka fariimaha deg dega ah looga dalbado dhamaan, hada wuxuu leeyahay boqolaal milyan oo isticmaaleyaal ah adduunka oo dhan. Sidoo kale, BlackBerry wuxuu ka mid noqday shirkadaha soo saara taleefannada casriga ah, sidaa darteed, Whatsapp ee Blackberry sidoo kale waa la heli karaa. Ku rakibidda WhatsApp aaladahaan yar kumbuyuutarka la adeegsanayo waa u fududahay uguna dhakhso badan tahay kuwa kale, taas oo ay ugu wacan tahay taageerada weyn ee ay WhatsApp siiso tiro badan oo ka mid ah meheradaha, sidaa darteed waxaan ugu soo dejisan karnaa WhatsApp-ka Blackberry habka ugu fudud ee dukaankiisa Codsiyada.
1 Si bilaash ah ugu soo dejiso WhatsApp-ka BlackBerry
2 WhatsApp weligiis ma u yahay lacag la’aan Blackberry?
Si bilaash ah ugu soo dejiso WhatsApp-ka BlackBerry
Ka yimid Dunida BlackBerry wax walboo way fududaan doonaan, waxaan uun galnaa tan LINK oo guji badhanka soo dejinta ee u muuqda agabka arjiga. Waxay si otomaatig ah u codsan doontaa Aqoonsigeena BlackBerry, markii la galo, soo degsigu wuu bilaabmi doonaa, waa inaan sugno oo keliya soo dejinta si loo sii wado rakibideeda.
Xiriirada waxay si toos ah ula midoobi doonaan barnaamijka WhatsApp markaan dhameyno nidaamka rakibida iyo hordhaca. Tallaabooyinka ugu horreeya, sida had iyo jeer, codsigu wuxuu na weydiin doonaa lambar taleefan, waa inaan galnaa isla lambarka kaarka SIM waxaan u isticmaaleynaa inaan ku sii wadno lambarka shaqeynta. Markaad gasho, waxay na weydiin doontaa username iyo sawir muuqaal ah haddii aan go'aansano inaan sidaa yeelno.
WhatsApp weligiis ma u yahay lacag la’aan Blackberry?
Waxaan ku soo gabagabeyn karnaa Ku rakibida WhatsApp ee BlackBerry. Si la mid ah sida kuwa kale ee dhufto ee kale, codsigu gebi ahaanba waa bilaash weligiis, sidaa darteed, uma baahnid inaan cusbooneysiinno rukhsaddayada WhatsApp oo waligiis ma dhacayo, sidaa darteed mar walba waan la xiriiri karnaa kuwa aan jecel nahay. Wadahadalku waa mid aad u fudud oo dhakhso badan, dabcan, waxaan la dhisi karnaa wadahadal cid kasta oo naga mid ah oo aan la xiriirayno ajendaha ay WhatsApp ku rakibtay taleefannadooda casriga ah, nooc kastoo ay yihiin iyo nidaamka ay ku shaqeeyaan.